Ii-FAQs-Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Kutheni oomatshini bakho beqhwa bomkhenkce bonga amandla ngakumbi kunabanye oomatshini bomkhenkce baseTshayina?
Sasebenzisa ingxubevange yesilivere ukwenza i-flake ice evaporator.Le mathiriyeli entsha yelungelo elilodwa lomenzi ineyona conductivity ingcono ye-thermal.Ukutshintshana kobushushu phakathi kwamanzi kunye nefriji kunokuqhutywa ngokufanelekileyo, ngoko ke, ukwenziwa komkhenkce kuya kusebenza kakuhle, kwaye amandla amancinci efriji ayafuneka.
Amaqondo obushushu obushushu benkqubo avumelekile ukuba abephezulu, njenge -18C.Amanzi anokukhenkceka kakuhle ngokobu bushushu buphuma bungumphunga, ngelixa ezinye iinkampani zaseTshayina kufuneka zenze inkqubo yazo ngobushushu obungama-22C obuphuphumayo.
Ukonga umbane = Ukugcinwa kwebhili yombane.
Omnye umatshini womkhenkce we-20T/day unokukunceda ukuba wonge ukuya kuthi ga kwi-USD 600000 kwiminyaka engama-20.Sibala umbane ngexabiso le-USD 14 nge-100KWH.
Ukugcina amandla, usebenzisa imathiriyeli entsha ukwenza umphunga.Ngaba loo nto intsha inexesha elide lenkonzo?
I-alloy yesilivere yenziwe ngezithako ezininzi, kwaye i-2 inamandla ngamaxesha e-carbon steel.
Emva konyango lobushushu, ii-evaporators ezinezixhobo ezitsha aziyi kuba nentlupheko yobomi ixesha elide.Siqeshe iqela leengcali ukuba lenze uvavanyo olupheleleyo kwiYunivesithi yaseZhangjiang Ocean.Kwaye siye savavanya le mathiriyeli ngoomatshini abangaphezu kwe-1000 kwimarike iminyaka emi-5.
Yimalini kumatshini wakho womkhenkce
A: Siza kucaphula ngokusekwe kwiimfuno zabathengi.
Ke umthengi kufuneka asinike olu lwazi lulandelayo emva koko sinokucaphula ngokufanelekileyo.
1.Loluphi uhlobo lomkhenkce omawulwenze?Umkhenkce oqhekezayo, umkhenkce wetyhubhu, umkhenkce webhloko, okanye akunjalo?
2.Zingaphi iitoni zomkhenkce ezenziwa mihla le, kwiiyure ezingama-24?
3.Yintoni eyona nto iya kusetyenziselwa umkhenkce?Ngeentlanzi zokukhenkceza, okanye akunjalo?
4.Ndixelele isicwangciso sakho malunga neshishini lomkhenkce, ngoko siya kukunika isisombululo esona sisombululo sisekelwe kumava akho.